Bollerwagen - iSearch
Start beerta Leisure Garden gaariyo
Ciyaaraha iyo Madaddaalada
Dibadda iyo Camping
2 Maxay tahay - gaariga?
3 Kala duwanaanshaha gawaarida
4 Gaariga beerta
5 Gaadiid culus oo culus
6 Wagon si loogu xoqo
7 Bollerwagen oo leh saqaf ama saqaf
8 Bollerwagen baaritaanka
9 Gaadiidka iyo isku xirka gawaarida
10 Qiyaasta waxtarka qiimaha ee baabuurta
11 Badbaadada iyo sahlanaanta isticmaalka gaariga
12 Faa'iidooyinka gaariga
13 Faa'iidooyinka kaararka
14 Dhaqanka Bollerwagen baabuurta Super
15 Maxaad u eegi kartaa marka aad iibsaneyso gawaarida?
16 Sawir gaaban oo gaaban
17 Warshadahani waxay yaqaanaan baabuurta bulldozer
18 Taariikhda baabuurta
19 Maxaa kale oo laga yaabo inay ka hadlaan baabuurta
Ereyga gaariyo inta badan dadka intooda badani waxay leeyihiin rag faraxsan oo cabitaankooda u gudbiya Maalinta Aabaha. Laakiin dhab ahaantii waa gaariyo, gaarigaan gaar ah, oo ah gaadhi ku habboon dhawr jeer.
Sababtoo ah gaari yar oo leh taayirada pneumatic weli waa hab caan ah ee gaadiidka qaybo badan oo adduunka ah, kaliya ka feker jasiiradaha baabuurta la mamnuuco. Carruurtu waxay jecel yihiin in gaariga laga dhex wado agagaaraha iyo sidoo kale sida xayiraad culus, weli wuu caan ku yahay dalka. Sababta ku filan, sidaas darteed, si gaariyo si aad u eegto si ka badan.
Waa maxay taasi - a gaariyo?
Der gaariyo waa baabuur-gacmeed - laakiin waa mid aan aad u weyneyn oo leh pneumatic, sidaas darteed halkii raaxo leh, sida kiiska leh gacanta foolqar caadi ah. Waxaa la xiraa oo dhan, inta badan ka samaysan alwaax iyo waa la jiidi karaa oo waa la xiri karaa iyadoo la adeegsanayo drawbar, laba taayir oo mid walba lagu xidho hal xargo, sidaas awgeedna waxaa loo wareejin karaa isla jihadaas.
Dhinaca tooska ah sida asfaltu wuxuu noqon karaa sidan gaariyo aad u fudud in la jiido, taas oo sidoo kale u oggolaanaysa gaadiidka culeysyo culus. Laakiin sidoo kale in dhulku uu ka dhaadhicin karaa iyada oo uu ku faafayo hawada. Si la mid ah caruurta yar-yar, caruurtu inta badan waa la qaadaa safarka, taas oo ah farxad gaar ah. Dhanka kale waxaa jira gaariyo ee "noocyada gaaban ee gaaban" ee caadiga ah, xitaa saqafka.
Quruxda dhexdooda gaariyo waa, sida lagu sharxay, laga sameeyey alwaax. Laakiin hadda waxaa jira kala duwanaansho:
Der gaariyo beerta
Tusaale ahaan, sida gawaarida beerta, oo ka kooban qaab shay ee nooca bacda beerta ku xiran. Sidaa daraadeed, gaadhigu waa mid fudud oo si habboon loogu habboon yahay in la gooyo gooynta cagaaran iwm. Bacda ayaa laga saari karaa loona nadiifiyaa si ka fudud gaari adag. Qaababka qaar ka mid ah beerta-gaariyo waxaa xitaa loo ogolyahay inuu ujoogeeynayo tareeno yaryar ama rasaas. Waxay udub dhexaad u yihiin hawlgalka gacanta iyo gawaarida gaariga.
gaariyo culeysyo culus
ka gaariyo gaar ahaan qulqulka culus ee culus, tuubbo tubbada birta ah ee dhuunta ayaa leh qashin. Darbiyada dhinaca shakhsi ahaaneed ayaa loo duubi karaa si ay u fududeeyaan loading iyo rarida. Waxay si gaar ah ugu haboon yihiin culeysyo culus gaariyo ka badan taayirrada adag.
gaariyo oo loogu talagalay
Dhismaha gaarka ah waa kan gaariyo, kuwaas oo isku dhafan oo furfuran, oo la mid ah boobsiyada qaarkood. Isku-darka ka soo baxa, dhuunta birta way qulqulaysaa, halka guddiga gudaha ka samaysan yahay jilicsan, laakiin walxaha adag, sidaas darteed waa la duubi karaa.
Faa'iidada: waxaa si fiican loogu qaadi karaa baabuurka oo waxaa lagu dhisaa dhowr gacan marka loo baahdo. Sidaas awgeed waa habboon tahay safarrada aad ku safrayso oo keliya baabuurka ama waxay xitaa raaci kartaa fasax si aad u qaadato waxyaabaha ugu muhiimsan safarrada.
gaariyo saqafka ama saqafka
Mar walba ma aha cimilada saxda ah ee safarka. Ka dibna gaariyo oo leh saqaf fiican, gaar ahaan marka caruurta la kaxeynayo, ama sidoo kale, si aan boorsooyinka aan loo qoyin. Intaa waxaa dheer, saqafku wuxuu ka ilaaliyaa oo keliya roobka, laakiin sidoo kale qorraxda badan. Qolalka saqafka ama daboolka laga heli karo qaar ka mid ah moodooyinka ayaa badanaa laga saari karaa si loo isticmaalo sida loo baahdo, oo la mid ah daboolka.
Marka aad iibsaneyso a Bollerwagens Hadda waxaa loo baahan yahay in ruuxa go'aan qaadashada loo baahan yahay. Go'aaminta waa ujeeddada gaariga loogu talagalay inuu fuliyo inta badan.
Bixinta iyo dhismaha a Bollerwagens
Inkastoo mid ka mid ah iibsashada gaariga carafka ee "dhan" ee dukaamada qalabka ama alaabta beerta, dalabyo badan ayaa hadda la heli karaa, kuwaas oo la keeno "xirmo xir". Halkan xirfad farsamo yar ayaa looga baahan yahay inuu sameeyo mid ka mid ah waxyaabaha ku jira sanduuqa gaariyo in la dhiso. Guud ahaan gaariyo in xaaladdan la kala bedelo online maanta.
Laakiin ha ka welwelin, imtixaanku wuxuu muujinayaa in ayadoo la raacayo buug-gacmeedka dhismaha, qaab kasta oo waliba laga yaabo inuu ka koobmo layman. Tani inta badan waa mid la fahmi karo iyo qaar ka mid ah xitaa qalabka ayaa lagu daray. qaar ka mid ah gaariyo sii wadaan in ay shaqeeyaan sida waafaqsan mabda'a la isku dayey oo la tijaabiyay ee baabuur gacmeed, kaas oo qaybaha dhinacyada lagu meeleeyo dhulka si sax ah, oo sidaas awgeed ay isku xiran yihiin.
Sicirka waxtarka qiimaha ee ka mid ah gaariyo
Dabcan waxaa jira kala duwanaansho qiimo iyo tayooyin kala duwan. Noocyada fudud ee ugu fudud waxay ku baxaan oo keliya wareega 50 Euro. Fiiri maadada iyo ka shaqeynta. Tani waa sababta oo ah baabuurku waa inuu leeyahay tuubo bir ah oo xasiloon, iyo sidoo kale, haddii ay suurtagal tahay, qoryaha dhabta ah, si xasillooni loo hubiyo. Adeegyada sida sarajirka bedbeddelka, saqafka ama kuraasta kursiga iyo barkimooyinka, dabcan, waxay kordhinayaan qiimaha, laakiin waxaa laga yaabaa inay u qalantaan haddii aad u baahan tahay si kastaba ha ahaatee mana ahan inay iibsadaan. Si kastaba ha ahaatee, waxay sidoo kale diyaar u yihiin inay yihiin qalab iyo sidaas darteed baabuur ayaa dib loo dhigi karaa waqti ka dib.
Badbaadada iyo sahlanaanta isticmaalka Bollerwagens
Marka la go'aaminayo nooca nooca ay tahay inay noqoto, ayaa door weyn ka ciyaara, taas oo inta badan la qaado. Sidaas oo kale waa carruurta gaariyo iyada oo ay hawo qaadayso si fiican, sababtoo ah waxay ka fiican yihiin Vollgummi. Si kastaba ha noqotee, waxay sidoo kale si fudud u jajabaan haddii aad baabuur ku wado wax fiiqan ama fiiqan. Bamka hawadu waa inuu ku jiraa boorsooyinka baabuurtaas.
Isticmaalidda raaxada sidoo kale waa arrin tixgelin ah. Ma jeclaan laheyd ama waa inay middaas mid ka mid ah gaariyo inta badan gaadiidka gawaarida, moodooyinka ayaa ah daboolka dabiiciga ah ee doorashada koowaad. Dhinaca kale, waxay ku yar yihiin xasiloonida iyo culeyska.
Imisa qadar ayaa loo ogolyahay waxay ku xiran tahay qaabka. Caadi ahaan caadi ahaan caadi ahaan waa 70 ilaa kilo mitir, gaar ahaan beerta waxaa jira noocyo gaar ah, oo abuura ilaa xNUMX kg. Ka reeban xitaa in ka badan.
Faa'iidooyinka a Bollerwagens
Mid ka mid ah faa'iidooyinka aan la garanaynin waa in gaariga caadiga ah uu fudud yahay oo la maareyn karo. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay mugga weyn ee weyn. Muraayadaha ayaa aad u ballaaran, taas oo sidoo kale hubinaysa in gaariga uusan ku degeyn xitaa xuddunta. Faa'iidada moodooyinka laysku daro waa in ay ku raaxaystaan ​​inay qaadaan; marka la eego moodooyinka ku-meel-gaadhka ah, xasilloonidu way ka sarreysaa, oo markaa suurtagal ah inay suurtogal ka dhigto.
Dhibaatooyinka a Bollerwagens
Laakiin kii gaariyo sidoo kale wuxuu leeyahay faa'iido daro. Sidaa daraadeed mid waa inuu ku xisaabiyaa xaqiiqda ah in si xun loo shaqeynayo, gaar ahaan moodooyinka qiimaha jaban. Muraayadaha laga helo caag adag ayaa qayb ahaan qeylinaya, dabcan moodooyinka go'an waxay kaloo yihiin kuwo aad u culus, sidaas darteed waxaad u baahan tahay meel bannaan. ah gaariyo waxay u baahan yihiin "gawaarida" garaashka ama gidaarka. Iyada oo moodooyinka laysku halleyn karo faa'iidadaas looma helin, hase yeeshee way yar yihiin mana awoodaan "inay qaadaan" wax badan.
gaariyoDhaqanka baabuurta Super
Moodooyinka "jir" ee baabuurta qoryaha ayaa weli xaq ku ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira qaybo qurux badan,gaariyo, taas oo u eg sida caruur yar yar loogu talagalay carruurta. Maxay yihiin faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka labadaas?
Faa'iidooyinka moodooyinka isku dhafan waxay cad yihiin: gaariga ayaa tagi kara meel kasta, safar, fasax ama xeebta. Sawirrada birta ee rinjiga waa kuwo xasilloon, dusha sare ayaa ka sameysan polyester, si ay u noqon karaan kuwo is dulfuulaya oo iftiin leh. Qaar ka mid ah moodooyinka ayaa leh tayo sarre leh waxaana lagu qalabeeyaa qurxinta kala duwan, maaddaama kuwan gawaarida ahi ay ugu horeyntii qaadaan caruur ama xayawaan guri.
Sida garbaha waxaa jira boorsooyin, saqafyada qorraxda iyo wixii la mid ah. Noocyo badan ayaa leh boodbood la dhigo, sidaas darteed waxaad ku ridi kartaa baabuurkaaga raaxada. Waxaa jira shirkado hormood ah, kuwaas oo si wadajir ah u dhaafaya midba midka kale qalabka.
Hababka alwaaxda ayaa weli la heli karaa naqshadooda fudud, laakiin sidoo kale tayo sare leh oo raaxo leh. Waxay ka samaysan yihiin qoryo iyo bira ah - kan dambe wuxuu badiyaa midabka midabka, alwaaxdu waa dabiici. Tani waxay, dabcan, loo adeegsan karaa abuuritaanka mid gaar ah, taas oo si gaar ah ugu faraxsan carruurta.
Finesse farsamo badanaa waa uu hooseeyaa - badankood ma laha bajin, iyo sidoo kale boogaha ama saqafyada ayaa badanaa la raadiyaa si aan micne lahayn. Si kastaba ha ahaatee, waxaa sidoo kale jira baabuur raaxo leh, halkaas oo aad ku xisaabtanto qiimaha agagaarka 200 Euro.
Maxaad ka iibsataa gaariyo eegto?
Waa inay noqotaa gaariyo waxaa habboon in aad ka fikirto wax badan ka hor. Tusaale ahaan, xajmiga iyo miisaanka loo xirxiray. Laakiin sidoo kale haddii ay tahay in la isku laabo ama "guud ahaan". Haddii tusaale ahaan loo isticmaalo qoryaha, waxaa kaliya oo suurtogal ah in su'aal la weydiiyo.
Dabcan, waxa kale oo ay door ka ciyaareysaa inta farqi ee tayada. Haddii aad rabto inaad carruurta ku rido dalxiiska inta badan, tayada iyo shaqo-qoristu way ka badan tahay adeega gaariyo badiyaa qaadashada dhalooyinka beerta ama qashinka beerta.
Muuqaal kale waa qiimaha. Tani waa inay ugu yaraan la xiriirto tayada. Gawaarida aan si fiican u shaqeynin waa in la helaa sida ku cad qaybta qiimaha hoose.
Waxaa sidoo kale lagugula talinayaa inaad kormeerto baabuurka marka la isu geeyo. Markaas waxaad arki kartaa sida ay u fududahay in leexiyo drawbar, haddii giraantu ay ku foorarsatay dhejiyeyaasha iyo haddii ay tahay mid sahlan.
Sawir gaaban oo qaar ka mid ah gaariyo
Waxaan dooneynaa in aan soo bandhigno dhowr tusaale iyo sidoo kale faa'iidooyinkooda iyo faa'iidooyinkooda.
FUXTEC gaariyo oo leh saqaf qorrax leh
Beachtrekker Life gaariyo
Mendler Oliveira gaariyo iyo ugu dambeyntii
D & S Sales gaariyo.
Aan la bilowno Fuxtec oo leh Sonnendach. Kani waa qaab lagu qaybsan yahay oo laga sameeyay tubbada birta. Dhibcaha imtixaanka leh dhererka dhererka, maqaarka sare ee dabacsan iyo taayirada hawada kubadda. Intaas waxaa dheer, baabuurkani wuxuu leeyahay dabool. Waa kilo 12 oo culus, laakiin sidoo kale wuxuu noqon karaa "kaliya" oo lagu buuxiyo kilinigyada 70. Marka lagu daro, soo-saaruhu wuxuu bixiyaa bacda wax lagu qaado iyo dusha sare ee lagu bedeli karo (labadaba waxaa ku jira baaxadda bixinta iyo weliba helitaanka qalab). Qiimaha waa khadka dhexe: kudhow Euro 150 waa inaad ku qarashgareysaa.
Marka xigta, fiiri dhow u dhow Beachtrekker Life gaariyo, Tani waxaa si joogta ah u heshay dadka isticmaala, gaar ahaan duruufaha iyo shaqaynta. Waxay ka kooban tahay alwaax iyo birta waxana ay leedahay faa'iido ay u leedahay in ay u guuraan dhamaan kiiloomitirada 100. Isaga qudhiisa ayaa waliba miisaamaya kiloomaha 16, waa mid isku laaban laakiin markaa way adag tahay. Tan iyo qaabka uu yahay budo iyo aan la rinjiyeeyn, waxaa suurtagal ah in la helo nolol shelf dheer. Baabuurtu waxay leedahay biin ka dibna waxaa lagu qalabeeyaa taayirada hawada. Haddii caruurtu la socdaan, baabuurkani waa mid raaxo leh. Ku fiicnaan waa gudaha gudaha. Sidoo kale dareen wanaagsan ayaa lagu ammaanay. Qiimaha waa, si kastaba ha ahaatee, wuxuu sidoo kale ku faanaa ku dhawaad ​​300 Euro.
Astaamo ahaan waa ka raqiisan yahay classic, oo ah Oliveira gaariyo ka samaysan alwaax. Waxay xitaa xitaa ka qaadi kartaa kaniiniyada 150. Miisaankiisu waa ka sarreeyaa kan hore - dhammaan kilinigga 17 waa dheelitirka. Laakiin tan iyo markii uu keli keli ah oo aan la wareegin aagga, gaabiskan waa mid aan loo dulqaadan karin. Qoryaha birta tuubada waxaa loo rinjiyeeyaa labo-jibbaar iyo sida muuqaal gaar ah oo loo-shaqeeyuhu qeexayo soosaarista deegaanka oo ah taayirada. Baabuurku wuxuu sameeyaa aragti guud oo deggan, kaas oo sidoo kale xaqiijinaya inta lagu jiro isticmaalka. Waxaa intaa dheer, waa mid aad u raqiisan oo kaliya in ka badan Euro 50 iyo fududahay in la soo ururiyo markii la iibsaday disassembled.
Marka la eego muuqaalka, "baabuurta" ka iibsashada D & S gaar ahaan qurux badan. Hase yeeshe, si kastaba ha ahaatee, waa inaad ka dhigtaa jarista shaqada iyo mudnaanta. this gaariyo wuxuu ka kooban yahay qoryo waxaana lagu dhejin karaa kilinigyada 150. Duufaanta hawadu waxay u dhigtaa mid raaxo leh, shaashadda birta tuubadu waxay keenaysaa xasilooni iyo tarpaulin waa la kala saari karaa.
Warshadahaas ayaa ka masuul ah iyaga gaariyo ogeysiiyo
Shirkadaha soo socda ayaa ka masuul ah soo saarista gaariyo oo waa in la eegaa si aad u dhow:
Fuxtec waxaa loo tixgeliyaa sida soo saaraha tayo sare leh. ah gaariyo waa kuwo dabacsan oo laysku dhejin karo oo si fiican looga shaqeynayo. Qiimaha ayaa waxoogaa ka sarreeya, laakiin taasi waxay sabab u tahay mudnaanta iyo tayada si ay u sharraxaan iyo sidaasi darteed.
Puky wuxuu diiradda saaraa naqshad gaar ah. Dhaqdhaqaaqa waxaa la siiyaa halkan, taas oo baabuurta loogu talagalay in badanaa loogu talagalay magaalada. Qiyaaso iyo qalab kala duwan ayaa la sameeyaa, baabuur alwaax ah iyo sidoo kale kuwa ka samaysan caag. Sidoo kale qiimaha halkan waa mid fiican.
Mendler waxay u taagan tahay gaariyo, kuwaas oo u fiican carruurta. Sidaa darteed, waxaa jira noocyo badan oo kursi lagu dhejiyo. Saqafku wuxuu diyaar u yahay inuu yahay mid xiran waxaana lagu rakibi karaa haddii loo baahdo. Baabuurtu waxay ka sameysan yihiin qoryo ama caag. Cabbirta iyo qiimaha kala duwanaanshuhu wuu kala duwan yahay, iibsadaha ayaa la baabiiyay si loo doorto.
Deuba gaariyo ayaa loo arkaa mid adag oo cimilada aan adkeyn. Qaar badan oo ka mid ah soo saaraha ayaa la isku laaban karaa. Waxaa sidoo kale jira saqafyada sida garoomada iyo qaar ka mid ah saaxiibbadooda ayaa ka badbaado badan tartanka. Dhab ahaan waa inaad u fiirsato miisaanka culus ee la oggol yahay, ka hor a gaariyo la doortay iyo iibsaday.
Waxaa loo tixgeliyaa sida gaar ahaan adag gaariyo ee Pinolino. Moodooyinka qaarkood ayaa si khaas ah loogu talagalay gaadiidka carruurta. Mashruucan waa tayo sare leh, inkasta oo baabuurta aysan u guurin qaybta qiimaha sare. Si kastaba ha ahaatee, qiimaha waa saddex-god.
Dabcan, waxaa jira shirkado kale gaariyo, oo soo saara saaxiibo wanaagsan oo raaxo leh. Tusaale ahaan Rosilino Turino iyo Hudora. Haddii aad jeceshahay in gaariga gaariga gaar ahaan socdaalka iyo socdaalka lagu tago, tusaale ahaan ah Boy Mountain Mountain ayaa si fiican loo isticmaali karaa. Dhanka kale baabuurta Walking Wagone waxay ku habboon yihiin xeebta. Wax kasta oo aad dooratid, waa inaad si taxaddar leh u eegtaa qiimaha wanaagsan ee lacagta.
Gawaarida gacmaha ee qaababka kala duwan ayaa dadku u adeegsadeen isla markiiba ka dib markii ay muraayada la socotay. Laakiin kii gaariyo, yaryar iyo gaari yar oo leh taayirada pneumatic inta badan, had iyo jeer wuxuu ahaa mid gaar ah oo ka mid ah baabuurta gacanta. Ereyga lama hubin, qofna wuxuu u maleynayaa in magaca uu ka yimid xaqiiqda ah in gawaarida ay sameeyeen dhawaaq codka jilicsan wadooyinka iyo wadooyinka wadaagga ah ee la wadaago. Siegfried Thurmann ayaa kaliya 2007 patent a fayl oo waxay inta badan ku saabsan yahay dayactirka umkippsicheren ah, kuwaas oo si gaar ah muhiim marka ay carruurta u dhaqaaqay la.
Der gaariyo waxay ka kooban tahay bir ah biraha, taas oo ahayd xirtey alwaax. Moodooyinka noocan ah waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwo caadi ah oo weli la heli karo maanta. Meelaha qaarkood, gaar ahaan baadiyaha ama jasiiradaha leh xakamaynta wadista, waxay wali ku leeyihiin muhiimadda ay u leeyihiin inay qaadaan culeysyo. Laakiin gaar ahaan xilliyada xiisaha, hawlaha maalinlaha ee aabbaha iyo wixii la mid ah, waxaa badanaa loo adeegsadaa sida gaadiidka.
Der gaariyo waa taariikh taariikheed oo dhaqan ahaan ah. Si ay u qaadaan culus culus, gaadhiga ayaa ahaa caawiyayaal caan ah tan iyo markii la abuuray ama horumarin dheeraad ah, oo aan cidna ka maqnaanin wax kale. Gaadiidka noocan ahi wuxuu sidoo kale door weyn ka ciyaaray ka dib iyo ka dib Dagaalkii Labaad ee Adduunka ee la xidhiidha duulimaadka iyo eryidda. Sababtoo ah qiyaastii qoyskaba waxay leedahay lahjad noocaas ah, waxaa badanaa loo arkaa inay yihiin habka kaliya ee lagu qaado carruurta yaryar iyo inta hartay.
Maxaa kale oo laga hadlo gaariyo
Qof kasta oo si gaar ah u xiiseynaya dhinacyada deegaanka waa in uu waydiisto habka iyo alaabta. Qaar ka mid ah soosaarayaasha ayaa ku xayeysiiya badeecooyinka khaaska ah ee deegaanka. Yaa a gaariyo oo laga sameeyay qoryo dhinacyada, waa in ay hubiyaan in la daaweeyo iyo in kale. Xaaladda qadhaadh ee daaweynta leh caanaha ama caanaha waa in la sameeyaa. Xaaladda alwaaxda dhuxusha, waxaa suurtagal ah in suurtogal ah in qofku taabto baabuurka isagoo ku dhejinaya ama cadayaya - xitaa xitaa carruurta. Qoryaha waa in kiis kasta laga ilaaliyo saamaynta deegaanka. Sidaa darteed geesaha jarjar ee qoryaha waa muhiim waana in la xiro.
Hadda waxaa jira goob joog ah oo joogto ah oo ku wareegsan gaariyo horumariyo. Waxaa loo yaqaan "Pimp my gaariyo"Waxaana la socdaa dhalinyaro kuwaas oo qaabeeya asxaabteeda si ay u helaan wakhti xaraarad ah cabitaankooda.
Wixii kasta - gaariyo waxay caan ku yihiin weligood, xitaa haddii maanta ay jiraan habab aad u fiican oo sahlan oo gaadiidka lagu qaado. Dhammaantood, waxay caan ku yihiin, waxaana sidoo kale soo saarey shirkado kala duwan oo raadinaya macaamiisha. Onlineka laakiin sidoo kale ganacsiga tafaariiqdu waa noocyo badan oo kala duwan, kuwaas oo leh faa'iidooyin kala duwan.
Gaadhi waa madadaalo, wax ku ool ah, waxaana loo isticmaali karaa ujeedooyin kala duwan. Tayada waxay ka kooban tahay qalab tayo sare leh iyo taxadar fiican.
EASYmaxx oo la marin karo taayirada Maalinta Aabaha, dukaamaysiga, gawaarida, gawaarida gawaarida ee aan lahayn saqafka daboolka leh, gawaarida xajmiga ah iyo sheybaarka - Awoodda xajinta: 80K
Daacad: qotomiyey xoogaa tallaabooyin ah ee seconds ama duubnaadaan. Size furan: 100 50 x x 61 cm, duubnaadaan 51x20x76cm (LxWxH) Platform 89x47cm (Filan 2 kartoon cabitaanka)
GOOBTA GOOBTA: Halka kartida 80kg iyo aagagga xNUMXx89cm waxaad badbaadin kartaa siyaabaha dheer ee xafladaha! Wanaagsan u ah Maalinta Aabaha iyo ragga ragga. Qolka ilaa foostada 47 13l beer! Waxa kale oo ku habboon kalluumeysiga maxaa yeelay offroad awood u leh inay kaashadaan taayirada la xoojiyay. Jiraan. Laba dhalada dheeraadka ah ee dhalada ku jirta
XADGUDUB KU DHAQAN AH: Dhaqdhaqaaq adag oo halis ah oo ka samaysan tuubo dhoobo ah oo dhoobo ah - Dabool adag, jawi u adkeysi leh iyo dabool fudud oo ka timaada dharka Oxford ee dhirta beerta. Nadiifinta nadiifinta, biyaha-celinta iyo shaqada culus
TALAALKA IYO DEMBIYADA BADBAADINTA: Ku mahadsanaan gacan qabasho telescopic oo ku habboon cabbirka jirka. Si ka duwan noocyada gawaarida xamuulka ah, DHAMMAAN DHAMMAAN oo dhan waa 360 ° leexan karo, sameynta gawaarida aadka u shaqeynaya
DHAMMAAN jeer: Haddii loo fududeeyo doonaa maalin shopping, shopping, kaambada, picnicking, beer, sports, kalluumaysiga, xeebta, kaynta, dhul, Kindertransport aan suunka, bacda qaboojinta, la cover roob, iid ah ama safar la cabo ee gaariyo EASYmaxx
Gawaarida isku laabma ee Fuxtec FX-CT500 waxay kuxiran tahay saqafka, biriiga hore, taayirrada caagga adag, boorsada dambe, oo ku habboon carruurta - asalka ah oo leh tayada GS-xaqiijiyay shahaadada!
Ciddiyaha ugu sarreeya ee taxanaha CT oo leh fariin laba gees ah, qorraxda loo yaqaan 'UV-guarded', jeebka gadaasha waaweyn ee kaydinta iyo ulaha telescopic ee jiidista - CT500
Gawaarida la fuuli karo oo leh taayirrada chrome ee taayirada caagga ah ee ku habboon carruurta sida xawaaraha kaliya ee GS-shaambe !!!
Qalabka telescopic ee jiidista, ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa qaybta la isku laabtay. Gogol-xaadhka hoose ee xumbada, dhammaan gawaarida xayawaanka ilaalinta ee gaadiidka carruurta
Si adag u istaag markaad isku laaban oo keliya 15cm ballaaran; gebi ahaanba la isugu soo ururiyey: furfuran, furfuran oo baabi'i
Qalabka ikhtiyaariga ah ee la heli karo: daboolka roobka, suumanka kursiga, suumanka bustaha hawada
SAMAX Bollerwagen Hand Trolley Garden Trolley Beach Car Foldable Carriage Dolly - Tilmaamaha Black / Orange
Qiyaasaha guud: qiyaastii 107 x 48 x 50 cm (LxWxH) oo la socota qiyaasta xNUMX cm sare, taayirada dhexroorka qiyaas ahaan 117 cm
Cabbirada isku laaban: qiyaastii 17 x 50 x 77 cm (TxBxH)
Lagu dhejin karo - sidaas awgeed waa sahlan tahay inaad kaydiso
Miisaanka culeyska: 80 kg, miisaan culus: qiyaastii 10,5 kg
Qalabka: 100% polyester Incl Cover daboolka ah, qaabeysan ee birta ah
Trolley gacan-ka-hadalka, trolley jardiino, handcart, trolley gaadiid ilaa 550kg culeys ah - taayirro pneumatic - soo saar gudaha ah oo laga saari karo
Illaa 550kg oo mushahar ah Gawaarida waaweyn, kubad-sameeye iyo baloogyada hawada ku xardhan ee biraha birta leh Xasilan, kaydinta la qaadi karo ee aaladda iyo maacuunta yaryar
Waxaa loo isticmaali karaa guriga, jardiinada, dabbaaldegyada, kaamamaynta iwm | Cilmiga, tarpaulin gudaha ah oo laga saari karo (la dhaqi karo) ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa unug xambaarsan
Waxaa loo isticmaali karaa guriga, jardiinada, dabbaaldegyada, kaamamka, iwm.
Si dhakhso leh u sii deynta qaybaha dhinacyadeeda si dhakhso leh loogu furo ama looga baxo | laga saari karo, gacanta lagu jeexjeexay iyo qayb isku jiid jiid jiid
Waxaa loo isticmaali karaa trailer ahaan cagafyada cagaaran, tusaale ahaan, Thanks to gacanta saarista iyo qaybta iskuxiran
Gawaarida isku-laaban ee Pinolino, Paji, laablaaban, incl. Sunroof, boorsada dabada iyo boorsada, Taayirrada PU, culeyska culeyska 70 kg, muuqaal cawlan
Shandad gacmeedka 'laabasho' Paxi 'oo qoraxdu kulushahay, qaado shandad iyo boorsada dabada. Xarkaha birta: rinji madow, dhar cawlan oo laga sameeyay 100% PU. Cabbirada L 124 x W 59 x H 67 oo leh saqaf 102 cm, culeys 11 kg, culeys 70 kg, sheyga no. 238001
Qalabka gacanta ayaa loo laabi karaa si loo badbaadiyo booska dhowr tillaabo oo fudud. Waxaa lagu dhejiyay boorso gacmeed wax ku ool ah, waxaa si fudud lagu qaadi karaa culeys ah 11 kg oo keliya waxayna ku habboon tahay xitaa garka ugu yar
Marka lagu daro aagga weyn ee xamuulka (L 86 x W 43 x H 25 cm), boorsada dabada ee jirta ayaa bixisa meel dheeri ah oo loogu talagalay dhammaan saaxiibbada safarka ee muhiimka ah. Xamuulka shandadaha gacanta ee la laalaabi karo waxaa laga ilaaliyaa iftiinka tooska ah ee duullimaadku ku jiro
Iyada oo la adeegsado faashad bir ah iyo taayirrada PU, gaariga laabashada ayaa ku habboon dhammaan waddooyinka iyo sidoo kale xeebta. Usha adag ee jiidista ayaa si fudud uga dhigaysa jiidista iyo dhaqaajinta taraafikada. Xirashada Pinolino-ka ayaa ah isha-dheeri ah ee indhaha
Pinolino waxay fulineysaa riyada carruurta ilaa iyo 1997 waxayna iibisaa alaabada carruurta, waxyaabaha kale ee lagu ciyaaro iyo alaabada lagu ciyaaro. Shirkadda Jarmalka kaliya waxay isticmaashaa varnishes, glazes iyo saliidaha ku habboon carruurta, waxay xubin ka tahay DVSI waxayna siisaa 10 sano damaanad Pinolino-Plus ah
Kesser trolley oo leh culeys culeyskiisu yahay 550kg oo jardiinooyin jaranjarada lagu qaado
Gawaarida Gaadiidka KESSER waxeey u egtahay in la adeegsado, sida gaadiidka xayawaanka ah, sida gawaarida xamuulka, sida qalabka baabuurta ee beerta ama sida gawaarida tareenka cawska.
Waad ku mahadsantahay qaybaha hoose ee si deg deg ah loola baxo oo si buuxda loo kala saari karo, gawaarida KESSER ee gaadiidka ayaa loo rogi karaa gawaarida muraayadda marna marna.
Sida fududeynaya inaad hoos u dhisto derbiyada dhinacyada si sahlan oo loo dajiyo.
Xitaa dhulka aan cidhiidhi ahayn, taayirrada hawada ee dabaasha iyo taayirada kubbadda ayaa ku hubiya in aan la jiidin.
- heli karaa guriga, beerta ama goobaha dhismaha - Ball-sita Taayirada pneumatic tuman Taayirada - saari kaydinta kala kharash ama sida unit taageero dheeraad ah - xamili saari karo iyo qayb ka xigay on drawbar ah
Gawaarida xayawaanka ee loo yaqaan 'RRROXX 34161 Gawaarida gawaarida gawaarida leh ee duubista gawaarida gawaarida isku laabmaya calaamadaha buluugga ah ee 80kg
RAMROXX - shaashad gacmeedka la laabto / wagon - oo jeebka laga qaadi karo - BLUE
Cabbirada: - Isugeynta cabbiraadda: L: 90 x W: 52 x H: 64 cm - Booska xadka: L: 80 x W: 45 x H: 30 cm - isku laabmay: L: 20 x W: 52 x H: 79 cm - Drawbar: L: 67 cm - dhexroorka taayirrada: 19,5 cm - balaca taayirrada: 4 cm - - culeys wadarta ah: qiyaastii 10 kg - culeyska ilaa ugu badnaan. 80 kg - UMA AHNA ISTICMAALKA JIRKA (tusaale ahaan joornaal, hayaha xaashiyaha leh)
Robust iyo shaqo tayo sare leh oo leh tuubbo bir ah oo bir ah - giraangiraha hore waa 360 ° wareejin kara - sidaa darteed aad u jilicsan booska ugu yar - Gawaarida jilicsan ee jilicsan - Kuwani waxay bixiyaan meel deggan xitaa xirmooyinka jilicsan - Iyagoo leh culeys sareeya ilaa xNUMX Kg culeyska - Boorsada waa laga saari karaa way fududahay in la nadiifiyo - Feyl dhowr tallaabo oo sahlan - sidaas awgeed aad ugu habboon in la miiro - Baakadaha cusub iyo asalka ah
Shandada gacmeedka 'Sekey' laabto leh oo leh bir biriq ah oo laabataysan Gacan ku duuban Gawaarida Gawaarida Safarka Beeraha Dabiiciga jardiinada Xeebta leh Gawaarida xamuulka ee dhammaan dusha kore
Sekey: Annaga oo ah Sekey waxaan nahay shirkad macaamiisha wadata oo ka go'an hormarinta alaabada banaanka ah ee aadka u gaarka ah isla markaana jaangooyooyinka ugu sareeya. In kasta oo aan bilownay 2016 oo keliya sanadka, astaantayada Sekey ayaa horay u noqotay mid ka mid ah sumadaha ugu caansan ee alaabooyinka bannaanka sida dalladaha, gawaarida gaashaaman, gazebos iwm guud ahaan Yurub. Sekey waxay u taagan tahay FASHION, QUALITY iyo LUXURY!
Gaadiidka banaanka ah ee dheeraadka ah ee gacanta la leh telescopic: Thanks to wheel wheels leh bareeg laba jibbaar ah, labada giraan bar hore waa la bedeli karaa by 360 °. Gawaarida ayaa leh hannaan lagu hagaajin karo si loo isticmaalo. Gawaarida way fududahay in la xakameeyo meelaha dusha sare leh, sidaas darteedna ku habboon beerta, xerada, dukaamaysiga, kalluumaysiga iyo waxyaabo kale oo badan.
Gaadhi sarreysa oo tayo fiican leh oo leh rakibid iyo kaydsi sahlan: Thanks to dhismaha qaabka dhismaha, Sekey baabuurtu waa mid aad u sahlan oo ku habboon in la dhiso oo laga xaaqo. Baska waxaa laga sameeyey dharka 600D Oxford, oo si sahlan loogu beddeli karo nadiifinta.
Gawaarida awoodda weyn: Gawaarida waxaa lagu qalabeysan yahay bir adag oo adag iyo walax waarta si ay u xajisto 80kg. Qaybta ugu weyni waxay cabbirtaa 98x50x76cm illaa 101cm, cabirka bedka cabbirkiisu waa 80x45x28cm ， cabbirka isku-laaban: 50cm x 20cm x 76cm bedbaadinta booska. Miisaanka saafiga ah ee ku dhawaad ​​10,5 KG iyo awoodda ugu badan ee culeyska ayaa ah 80KG.
Maqaayad Muhiim ah: Faylka Sekey x 1, Hagaha alaabta x 1. Gawaaradayadu waxay ku dhacdaa sheyga sanadka 2. Haddii aad qabtid su'aalo, fadlan ku qor qaybta bukaanka ama nagala soo xiriir [Email ilaaliyo] Waxaan ka jawaabi doonaa saacadaha 24 maalmaha shaqada ama saacadaha 48 dhamaadka todobaadka.
Shandada gacmeedka Dameyda jilcsan iskula laablaaban Gacan-ka-banaanka Gacan-ka-bannaanka bannaanka Xeebta cagaarka ah
Sekey ---- Waxaan joognaa Sekey waa shirkad macaamiisha ah oo ay isku taxalujisay inay soo saaraan waxyaabaha ugu caamsan oo muuqaalkooda dibadda u ah heerarka ugu sareeya. Inkasta oo aan bilaabnay 2016 oo kaliya sanadka, nooca Sekey wuxuu mar hore noqday mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee alaabada dibadda ah sida dalladaha, carts, gaaska iyo iwm. Sekey waxay u taagan tahay FASHION, QUALITY iyo LUXURY!
Ujeedo badan oo Fudud oo Waji ah Wajiga ----- Gaarigeenu wuxuu isticmaalaa tiknoolajiyada cusub ee casriga ah ee ay gacanta ku hayaan maaraynta giraangirta. Iyada oo qaabab cusub iyo weelasha loogu talagalay muraayadaha waaweyn ee PU-ga, waxaanu awood u siineynaa maneuverability-ga oo leh wakhti yar! Waad ku mahadsan tahay wheels-ka waaweyn iyo qaabka adag, rooggaggu wuxuu u qaadi karaa 80KG oo sidaas darteed waa ku haboon yahay beerta, duurka duurjoogta, cawska, xeebta, wax soo gadashada iyo wixii la mid ah.
Gaadiidka tikidhada ee tayo sare leh oo leh sahlan iyo kaydinta sahlan ----- Sekey baabuurtu waa mid aad u fudud in la rakibo oo lagu keydiyo, oo aad ku raaxaysato nolol maalmeedka. Maqaarkiisa waxaa laga sameeyey 600D laba dhejiyaal polyester ah oo la adkeyn karo oo fududeynaya nadiifinta iyo beddelidda. Dhererka gawaarida xamuulka ah waa mid dib loo soo celin karo oo la hagaajin karo.
gaadhiga gacantiisa ku xamili ah hagaajin iyo awoodda weyn ----- Tallaabooyinka qayb weyn ee 98 x 59 x107cm, aragti meesha loading waa 80 * 45 * 26cm (94L), aragti duubnaadaan: 59cm x 21cm x 77cm ee kaydka bannaan, miisaanka net qiyaastii 10.5KG iyo ugu badnaan kartida sicirka 80KG.
Tusmada Xirmooyinka ----- Gawaarida isku-lalmaysa tokey oo leh dabool difaac, tilmaamaha alaabada. Faahfaahin: Waxaad ka heli doontaa qaansheeg VAT ka dib iibsiga emaylka. Wixii ah walaacyo kale oo la xiriira, fadlan la xiriir adeegga macaamiisha.
Flieks handcart hand trolley gacan labalaab ah, safarka trolley jardiinka la iskula laabmi karo 360 ¡ã wareegi karo
CODACITY LARGE (90L) - Kulankan taraafigga ah ee sekan ah, shir uma baahna! Howlaha isku laabashada la taaban karo ayaa fududeynaya isu imaatinka iyo kala bixida.
Cabbirada gacanta gacanta gacanta ku dhowaad 89,5 x 50,5 x 57-102 cm. Cabbirka (gudaha) - qiyaastii. 84 x 43 x 25 cm. Gawaarida hore waxaa loo wareejin karaa 360 ° si raaxo leh loo maareeyo.
N FALANQEY LACAG! - Hayso shaashaddan isku-laaban ee isku-dhejiska ah .. Qaabka adag ayaa u oggolaanaya culaysyo dhan ilaa 100kg, oo dharka waara ee 600D si fudud ayaa loo nadiifin karaa. Marka gaadhiga la jiido, rarku waa 100 kg, awooda ugu badan ee gaadhigu waa 150 kg marka ay wali taagan tahay.
FE QIIMAYNTA GUURKA waxaa ku jira gacanta lagu habeyn karo oo loogu talagalay gaadiid fudud iyo kuwa haysta koobabka mesh 2 mesh si loo ilaaliyo cabitaankaaga. Dhererka gacanta: qiyaastii. 57-102 CM.
GAADIIDKA FARSAMADA-Buuggan gacanta wuxuu ku Fiican yahay u qaadista qalabka dhacdooyinka isboorti ee banaanka ah, riwaayadaha, safarada lagu tagayo beerta nasashada iyo ku habboon guriga.
tug laga yaabaa in
Maqaalka horekayd kaashawiito
Maqaalka xigtabaaskiilka korontada